Adeegyada Naqshadeynta Iibka iyo Ijaarka gudaha Singapore
Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha gudaha District 10
Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha gudaha Central
Waxa daabacay max william
arag Bixiyeyaasha Adeegga Maaliyadeed la daabacay 2 years ago
Waxa daabacay osman ibrahim
Waxa daabacay chong in peng
arag Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha la daabacay 2 years ago
Qalabka jikada | Qalabka Korantada | Bixiyaha Musqusha Musqulaha | Singapore
OneSgBath guri-qurxiye hogaan ah ayaa siiya agabka jikada, qalabka korantada, aaladaha musqusha ee Singaporehttp: //www.onesgbath.com/
Xulo qaybAccommodations Spare roomsBusiness Directory Financial Service Providers Home Improvement Contractors Furniture Companies
Singapore ((dhagayso)), oo si rasmi ah u ah Jamhuuriyadda Singapore, waa jasiirad madaxbannaan oo ku taal badda badaha Koonfur-bari Aasiya. Waxay ku taalaa hal digrii oo ah kiiloomitir (137 kiiloomitir ama 85 mayl) dhanka waqooyi bariga, dhinaca koonfureed ee jasiiradda Malay Peninsula, oo xaduud la leh dariiqyada Malacca ee galbeedka, jasiiradaha Riau ee Indonesia dhinaca koonfureed, iyo Koonfurta Shiinaha Shiinaha Koonfurta bari. Dhulka dalkiisu wuxuu ka kooban yahay hal jasiiradood oo waaweyn, 63 jasiirad dayax gacmeedyo iyo jasiirado, iyo hal jasiirad bannaanka ka ah, aagga isku-darka kaas oo 25% kordhay tan iyo markii ay xornimada dalka ka qaadatay mashaariicaha dib-u-soo-celinta dhulalka. Intii lagu gudajiray qarniyaal-sannadeedkeeda dheer, Singapore waxay ahayd boqortooyo badeed oo hoos timaad suzerainty dhowr siyaasadood oo isku xigta: bilowgii taxane taxan oo boqortooyooyinkii thalassocratic medieval, boqortooyadii dhexe ee Singapura, iyo ugu dambeyntii laba dhex-dhexaad ilaa sultanates casri hore. Imaatinka Stamford Raffles 1819, sarkaal gumeystihii Ingiriiska, iyo asaaskii ku xigey ee la aasaasay shirkad ganacsi oo laga leeyahay UK East India oo ku taal jasiiradda weyn ayaa astaan ​​u noqotay hiddaha iyo dhaqanka casriga ah ee Singapore. Shan sano kadib, shirkadaha Ingiriiska iyo Dutch-ka ayaa saxeexay Heshiiskii Anglo-Dutch ee 1824, iyadoo Boqortooyada Ingiriiska ay si xoog ah ula dagaallantay Singapore nidaamka, iyaga oo xusaya joojinta xukunkii asalka u ahaa jasiiradda markii ugu horeysay taariikhdeeda. Sanadkii 1826, Singapore waxaa lagu daray Meelaha Degsiimada, oo ah Madaxweynihii hore ee Ingiriiska Malayan-kii hore ee shirkadda. Sanadkii 1830, Degsiimooyinka waxaa lala xiriiriyay Hindiya British ahaan degenaanshaha bari, halkaas oo laga xukumi doono caasimada Calcutta ee hoos timaada laba maamul - ilaa 1858 hoos imaadka xukunka shirkadda, iyo - wixii ka dambeeyay burburkii Shirkadda markii ay dhacday kacdoonkii 1857 ee Hindiya. - ilaa 1867 oo hoos yimaada sharciga tooska ah ee Boqortooyada. Sanadkii 1867, maamulkii dejimaha waxaa si toos ah loogu wareejiyay London, taas oo hoos imaanaysa xukunka tooska ah ee Boqortooyada Midowday oo ah gumeyste cusub. Laga soo bilaabo 1867 ilaa 1940-kii, Singapore waxay noqotay meel liidata oo hoos timaada maamulka Boqortooyada Ingiriiska, soo jiidashada dad badan oo degayaal cusub ah oo ka kala yimid gobolka iyo wixii ka dambeeya. Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Boqortooyada Japan waxay soo weerartay oo qabsatay Singapore, taas oo dhalisay in heshiis dhex-dhexaadin ah la yeesho xukunkii gumeystihii Ingiriiska laga soo bilaabo 1942 ilaa 1945. Ka dib is dhiibidii Japan ee 1945, Singapore waxaa dib loogu celiyay gacantii Ingiriiska; Sanadkii 1946, Degsiimooyinka Xariiqda ayaa la kala diray, Singaporena waxay noqotay gumeysi keli ku taaggan. Sannadkii 1959, ka dib muddo dheer oo xanaaq badan oo ka soo horjeedda xukunka gumeysiga, ayaa Singapore la siiyay madax-bannaani xaddidan; Sannadkii 1963, waxay si buuxda uga baxday Boqortooyadii Ingiriiska markii ay federaalnimadeeda la yeelatay dhulalkii hore ee Ingriiska Malaya iyo British Borneo si ay u dhisaan waddanka cusub ee Malaysia. Si kastaba ha noqotee, ka dib laba sano oo rabshado ah oo dowlad goboleed loo dhan yahay, oo ay xumeysay isir naceyb iyo kala duwanaansho kale oo is daba joog ah, ayaa Singapore laga saaray 1965, iyada oo noqotay waddankii ugu horreeyay taariikhda casriga ah ee xornimada ka soo horjeedsada - inkasta oo sheekadani weli muran badan tahay. Sannadihii hore ee jahwareerka ka dib, qarannimada cusub ee madax-bannaanida - oo loo arkaa inay tahay dowlad aan lagu noolaan karin by indha-indheeyayaal caalami ah sababahooda oo hoos u dhacay awgeed, u nuglaanta juquraafi ahaan, maqnaanshaha kheyraadka dabiiciga ah, iyo dhul-gariir la'aan — waxay caqabado ka muujiyeen ayagoo si dhaqso leh u kobcaya una warshadaynaya sidii ay u noqdeen meel sare. Dhaqaalaha dakhliga iyo dalka horumaray hal jiil gudahood. Singapore waa jamhuuriyad dastuuri ah oo baarlamaani ah oo leh gole sharci-dejin u gooni ah oo lagu gartey xukunka xisbiyada badan tan iyo markii xornimada qaadatay. Qeybta Sirdoonka Dhaqaalaha waxay Singapore ku qiimeeyeen "dimoqraadiyad fuleyn" sanadka 2019. Waa gobolka kaliya ee runti xor u ah adduunka; Waxay leedahay lacag u gaar ah iyo ciidan si wanaagsan loo maalgeliyey oo loo arko inay yihiin kuwa ugu horumarsan Koonfur Bari Aasiya. Dalku wuxuu hoy u yahay 5.6 milyan oo degane, 61% (3.4 milyan) oo reer Singapore ah; dhaxal ahaan dabeecadiisa taariikhiga ah sida 'entrepôt'. Singapore waa dal dad badan oo leh jinsiyad, dhaqan, iyo diimo kala jaad jaad ah isla markaana ka tarjumaya qaab dhismeedka wadammada badan, dhaqammada badan waxaa lagu aasaasay mabda 'aasaaska u ah gobolka, qaabeynta siyaasada dalka iyo siyaasadaha qaran. Dalka, oo ah Anglophone, wuxuu leeyahay afar luqadood oo rasmi ah: Ingiriiska, Malay, Shiinaha, iyo Tamil; Malays, oo ah luqadda asalka ee dalka, waxaa loo ixtiraamayaa sharciga ilaalintiisa dastuurka dalka inuu yahay luuqadda qaran, halka Ingiriisigu yahay luqadda afka hooyo, iyadoo inta badan dadka reer Singapore ay ku hadlaan sidii afaf guud. Maanta, Singapore waxay xubin ka tahay hay'ado fara badan oo caalami ah, iyadoo ka mid ah shanta xubnood ee aasaasay ASEAN, waa xarunta iskaashiga dhaqaalaha Asia-Pacific (APEC) iyo Golaha Iskaashiga Dhaqaalaha Pacific (PECC), waa xubin ka tirsan Qaramada Midoobay , Ururka Ganacsiga Dunida, Shirka Bariga Aasiya, Dhaqdhaqaaqa Aan La Aaminsanayn, iyo Dawlada Dhexe, waana marti-sharaf soo noqnoqonaysa shir sannadeedka G20; saameyntooda dusha ka saarneyd arrimaha caalamka, marka la eego cabirkeeda, waxay horseeday in loo kala saaro awood dhexe. Wadanku waa wadanka ugu madaxbanaan qaasiga Aasiya, isagoo kaalinta 9aad kaga jira Liiska Horumarinta Aadanaha ee Qaramada Midoobay, waxaana uu leeyahay dalka 7aad ee ugu sarreeya GDP adduunka. Waxaa sidoo kale loo arkaa 'Transparency International' inay tahay dalka Awoodda aan lagu baabi'in karin ee Aasiya, iyo shanaad shanaad ee dunida aan la isku hallayn karin. Dalka Singapore waxaa lagu meeleeyaa tilmaamaha bulshada ee muhiimka ah: waxbarashada, daryeelka caafimaadka, tayada nolosha, badbaadada shaqsiyeed iyo guriyeynta, oo leh saamiga lahaanshaha guryaha oo ah 91%. Dadka reer Singapore ayaa ku raaxeysta mid ka mid ah dhimashada cimriga dheer ee adduunka iyo mid ka mid ah heerarka dhimashada carruurta ugu yar adduunka. Magaalo ahaan, Singapore waxaa loo asteeyey inay tahay Alpha + magaalo caalami ah, waana dalka kaliya ee Aasiya oo leh qiimeynta AAA oo leh qiimeyn dhammaan hay'adaha waaweyn ee qiimeynta. Waa xarun weyn oo dhaqaale iyo dhoofineed, waxay si joogto ah u qiimeysay magaalada ugu qaalisan ee lagu noolaado ilaa iyo sanadkii 2013, waxaana loo aqoonsaday inay tahay goob cashuureed. Singapore sidoo kale waa dalxiis dalxiis caan ah, oo leh astaamo caan ah sida Merlion, Marina Bay Sands, Gardens by Bay, Jewel, Orchard Road suunka, jasiiradda loo dalxiis tago ee Sentosa, iyo jardiinooyinka Botanic ee Singapore, oo keliya jardiinada kuleylka ah ee adduunka in lagu sharfo sida Xarunta UNESCO ee Dhaxalka Dunida.
Dhammaan qeybahaDegaannoTusaha Ganacsiga